Gerrard vs Lampard vs Solskjaer - Haddii Uu Solskjaer United Haysto, Lampard Chelsea Ku Dhaw Yahay Gerrard-na Maxaa Diidaya? Steven Oo PL Looga Wacayo. - Gool24.Net
Gerrard vs Lampard vs Solskjaer – Haddii Uu Solskjaer United Haysto, Lampard Chelsea Ku Dhaw Yahay Gerrard-na Maxaa Diidaya? Steven Oo PL Looga Wacayo.
Horyaalka Premier League ayaa xilli ciyaareed kasta ah mid dhacdadiisa iyo layaabkiisa wata, Xilli ciyaareedkii dhawaa ayay mucjisadiisu ahayd dagaalkii ilaa maalintii ugu dambeysay gaadhay ee Liverpool iyo Manchester City.
Xilli ciyaareedka soo socda ayaa ah mid sidoo kale yeelan doona mucjisadiisa gaarka ah balse waxa haatanba laga sii naawilayaa kulamo dhex mari doona halyeeyo in badan horyaalka ciyaartoy ahaan usoo iftiimiyay.
Aan ku bilawnee Ole Gunnar Solskjaer oo ah halyeey Manchester United ah ayaa haatan lixdii bilood ee ugu dambeeyayba soo haystaas jagadaas waxaana uu xilli ciyaareedkan 2019-2020 noqon doonaa midkii ugu horreeyay ee uu la bilawdo.
Dhinaca kale Frank Lampard oo ah gool dhaliyaha abid ugu sarreeya taariikhda Chelsea ayaa qarka u saaran inuu noqdo taliyaha xiga ee Stamford Bridge.
Waxa xusid mudan in jamaahiirtda kubadda cagtu ay haatanba ku riyoonayaan in Lampard kulankiisa ugu horreeya ee Premier League uu tijaabo kusoo mari doono Old Trafford isla markaana booqan doono Man United iyo Solskjaer.
Dhinaca kale labada halyeey ee kooxaha Arsenal iyo Liverpool ee kala ah Patrick Vieira iyo Steven Gerrard ayaa iyagu soo galay liiska tababarayaasha ay doonayso kooxda Newcastle United.
Newcastle United ayaa dhawaan shaacisay in tababaraha ree Spain uu kooxdeeda iskaga tagi doono marka uu dhaco heshiiskiisu dhammaadka bishan June.
Sidoo kale waxa liiska tababarayasha ay Newcastle ilaa haatan doonayso kamida ku xigeenka Pep Guardiola ahna xiddigii hore ee Arsenal Mikel Arteta.
Si kastaba ha ahaatee, In ay iska hor yimaadaan Solskjaer, Lampard iyo Gerrard/Viera ayaa ah wax ay aad u jeclaysan doonaan taageerayaasha Premier League.